Tilmaamaha Bandhigyada Fractal Chaos Band ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Fractal Chaos Bands - hal tilmaan oo loogu talagalay xulashooyinka faaiidada leh
Hal qalab ma noqon karo cunsur go'aaminta. Tani waa mabda'a ugu weyn ee falanqaynta farsamada ee dhammaan ganacsatada ka fikiraya sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah waa inay ilaaliyaan. Laakiin, waxaa jira waxyaabo ka reeban, sida Fractal Chaos Bands, oo kaligeed heli kara heshiis sida ugu fiican ula jaan qaadaya aragtida Dow Theory “qiimaha wax walba waa la tixgeliyaa.”
Kooxaha Fractal Chaos . Mid ka mid ah xulashooyinka ugu faa'iidada badan waa «qiimaha kanaalka». Xadka sare wuxuu muujinayaa qiimaha ugu badan ee hantida muddooyinkii la soo dhaafay, ka hooseeya ugu yar. Burburintoodu waxay noqon doontaa xaqiijin isbeddel oo waad furi kartaa ikhtiyaar.
Tilmaamuhu lama heli karo dhammaan goobaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah . Haddii dillaalkaagu uusan lahayn tilmaantan, waad ku soo dejisan kartaa bilaash internetka oo waxaad u isticmaali kartaa meel kasta oo ganacsi oo kale (tusaale ahaan, MetaTrader) oo ah calaamado lagu furayo ikhtiyaarka koontadaada.
Ikhtiyaar CALL. Qiimuhu wuxuu ka sarreeyaa soohdinta sare ee kanaalka ama wuxuu "ka galaa" tilmaame ka soo baxa xagga hoose ilaa kor. Xulashada labaad waxaa kaliya loogu talagalay ganacsatada xirfadleyda ah!
Dooro door. Xaaladaha iska soo horjeedda - Qiimuhu wuxuu ka hooseeyaa soohdinta hoose ama wuxuu u guuraa gudaha gudaha tilmaameha kor ilaa hoos.
Talooyin ku saabsan isticmaalka.
Qalabyada isla kooxda, kiiskeenna, aaladaha isbeddellada, xitaa iyagoo leh xaddidaadyo kala duwan, ma noqon karaan qodob go'aaminaya furitaanka boos cusub. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka hesho xaqiijin dheeri ah oscillators, tusaale ahaan, RSI, CCI, Stochastic, ama vfxAlert software-ka calaamadda binary , oo si sax ah u tixgelinaya muuqaalka xaaladaha xad-dhaafka / xaddiga xad dhaafka ah iyo dhaqdhaqaaqa isbeddellada.
Markaad ka ganacsaneyso maalinta ugu dambeysa, waxaan kugula talineynaa inaad sameyso falanqeyn ballaadhan oo suuqa ah - sida caadiga ah, waxaa jira xaalado badan oo caadi ah oo ku saabsan hantida iyo waqtiyada kala duwan, ee Fractal Chaos Bands ay si isku mid ah uga falceliyaan.
Gebogebadii, waxaan mar labaad idin xusuusinaynaa iyada oo xuduudaha aasaasiga ah ee Fractal Chaos Bands, iyadoo kuxiran sifooyinka hantida, ay labaduba bixin karaan calaamado la isku halleyn karo ayna aad u daahi karaan xitaa xilliyada H4-W1 (usbuuc). On Forex, fiiri sida ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u shaqeynayo loona yareeyo tirada xilliyada haddii loo baahdo.